स्थानीय निर्वाचन : एमालेविरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्र - Kantipath.com
स्थानीय निर्वाचन : एमालेविरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्र
काठमाडौं – प्रमुख सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मुलुकको सबैभन्दा ठूला तीन उपमहानगर पालिकामा तालमेल भएको छ । एमालेविरुद्ध स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेका यी दलहरुले यसपाली एमालेलाई आफ्नो हैसियत देखाउने बताएका छन् ।
बिषेस स्रोतका अनुसार काठमाण्डौं महानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र पोखराको लेखनाथ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने भएका हुन् । यद्यपि ती दलले मंगलबार छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु मेयर उम्मेदवार छिन् ।
छोरीलाई जसरी पनि निर्वाचन जिताउन र आगामी संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन प्रचण्डले काठमाण्डौंमा काँग्रेसलाई सघाउने र भतरपुर आफूले लिने सहमति गरेका छन् । प्रचण्ड संसदीय निर्वाचनमा गृहजिल्ला चितवनबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।
भरतपुरमा उपमेयरमा काँग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट भरतपुरको मेयरमा दिनेश कोइराला र उपमेयरमा पार्वती शाहले उम्मेदवारी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरमा सुरेन्द्र गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ ।
काँग्रेसले रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नै तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिएका कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएको हो । कोइराला नेता कृष्ण सिटौला निकट मानिन्छन् । विवादका बीच कोइरालाले मंगलबार मात्र टिकट लिएर गएका थिए ।
यस्तै काठमाण्डौं महानगरपालिकामा काँग्रेसले मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका दाजु राजुराज जोशीलाई मेयर पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । उपमेयरमा हरिप्रभा खड्गी छिन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा सर्वोत्तम डंगोल र उपमेयरमा सुशीला पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
डंगोल गत संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीबाटै काठमाण्डौं–७ मा उम्मेदवार थिए । तर, उनको जमानत जफत भएको थियो । काँग्रेसलाई सघाउने रणनीतिअन्तर्गत नै डंगोललाई माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाएको हो ।
ललितपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रले मेयर र काँग्रेसले उपमेयर लिने भित्री सहमति छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्रले मेयरमा दिनेश महर्जन र उपमेयरमा सोना शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । काँग्रेसबाट चिरिबाबु महर्जन मेयर र गीता सत्याल उपमेयरका उम्मेदवार छन् । उता पोखराको लेखनाथ महानगरपालिकामा माओवादीले काँग्रेसका मेयर उम्मेदवारलाई सघाएर आफूले उपमेयर लिने भएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट रामजी कुँवर मेयरका उम्मेदवार छन् ।
उपमेयरमा सरस्वती गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । माओवादी केन्द्रबाट विश्वप्रकाश लामिछानेले मेयरमा र गोमा ढकालले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच चुनावी तालमेल भएका स्थानमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने सहमति भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि (बिहीबार) सम्मको समय दिएको छ ।
Previous Previous post: गोहीबाट भाग्यले बाँचेका अर्जुन फर्किए घर !
Next Next post: स्थानीय निर्वाचन : काठमाडौँमा ४ हजार १ सय कर्मचारी खटाउने
यस कारण समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरू सामूहिक राजीनामा दिँदै…!
प्रधानन्यायाधीशको चेतावनीको बाबजुद ओली पक्षका वकिलले दर्ता गरे ११ न्यायाधिश विरुद्ध निवेदन
नबिल बैंकका सुरक्षागार्डको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
ट्याक्सीभाडा वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी
विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैँ
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा, स्वागत नेपालसहित ६ जना पक्राउ
पार्टीभित्र घुसेका ‘सामन्ती’हरुले व्यवस्था उल्ट्याउन खोज्दैछन : प्रचण्ड
झन्डै चोरी भयो श्रीपेच : सेनाले जोगायो, चोर्न खोज्ने पक्राउ